Kuklonyeliswe abafundi abenza kahle eSobantu High School | Eyethu News
Crunch talks as Mugabe and generals thrash out his exit - 39 mins ago
Merkel in final push for coalition to avert crisis - 41 mins ago
Sixth Miss World win draws India level with Venezuela – WATCH - 49 mins ago
Kuklonyeliswe abafundi abenza kahle eSobantu High School
“Umucimbi owenziwa minyaka yonke ukukhuthaza abafundi.”
KUKONYELISWE abafundi basesikoleni samabanga aphakeme iSobantu High School eMgungundlovu abenza kahle ezifundweni zabo ngonyaka ka- 2016 ehholo lomphakathi iMfenendala ngoLwesihlanu olwedlule.
Lomcimbi owenziwa minyaka yonke ubuhanjelwe abafundi, abazali kanye nabebemele ihhovisi lekhansela. Inhloso yawo ngukugqugquzela abafundi kuphinde kuklonyeliswe abenza kahle. Ngokusho kuka Nkk Xoliswa Magubane onguthisha wakulesikole bafuna nalaba abangenzi kahle bathole ukukhuthazeka ukuze bakhuphule amasokisi.
“Besikhetha abavelele abathathu esifundweni ngasinye. Kukhona abafundi abathola izitifiketi ezihamba nezindondo labo ngabathole amamaki angaphansi kuka- 80%. Sinabafundi abaqhamuka emakhaya angamile kahle nabese bezibukela phansi bayaqala basebenza ngokuzikhandla njengoba bebona ontanga babo benza kahle. Kunezinye izingane ezithole amamedali ezimele isikole kwezemidlalo (athletics),” kubeka uNkk Magubane.
Funda olunye udaba : Kuzoba khona umbukiso we-Pre-Comrades
Uqhube wathi kulaba abangatholanga lutho bangadikibali kodwa kumele lokhu kube yisifundo kubo bashintshe indlela abenza ngayo bazimisele ukuze kuthi ngonyaka ozayo kube yibo abaklonyeliswayo ngokusebenza kwabo ngokuzikhandla. Uphethe ngokuthi abonge othisha bonke ngomsebenzi wabo abawenzayo oncomekayo.